I-Belfast Back House - I-Airbnb
I-Belfast Back House
Belfast, Maine, i-United States
Ikamelo e-ikamelo lezivakashi ibungazwe ngu-Leigh
U-Leigh Ungumbungazi ovelele
Igumbi lokulala elithokomele, elihlanzekile "endlini engemuva" elungisiwe yendlu yasepulazini yaseMaine yango-1850s. Indawo ekahle yokuhlola iMid-Coast Maine nedolobha elijabulisayo laseBelfast, noma njengendawo yokuma ngokushesha lapho uya e-Acadia National Park. Ngalesi sikhathi sobhadane, senyuse uhlelo lwethu olujwayelekile lokuhlanza futhi sizokhipha umoya endaweni ngomoya omusha phakathi kwezivakashi. Igumbi linomnyango oyimfihlo - asikho isidingo sanoma yikuphi ukusebenzelana nababungazi. Indawo yokupaka yesivakashi ezinikele yokufinyelela noma kunini.
Jabulela indawo yethu esanda kulungiswa, okuhlanganisa nendlu yokugezela yangasese eneshawa yemvula. Izingubo zokulala zikakotini namathawula, okokududuza okuphansi, umatilasi onethezekile, iphampu yokushisa entsha ezokugcina ufudumele noma upholile (kuye ngesizini), isifudumezi-mkhathi salezo zinsuku nobusuku obubandayo obubandayo, ikhabethe kanye nesethi yamadrowa. Kuleli gumbi kukhona itiye, ikhofi nesiqandisi.
Lesi sikhala sifanelekile kunoma ubani ofuna enye indawo ethengekayo, eyimfihlo, ehlanzekile, ephephile nenethezekile yegumbi lehhotela. Kuhle kulabo abafuna ukuchitha ubusuku besendleleni eya noma besuka e-Acadia National Park, beya endaweni ohambweni lwebhizinisi lwezinsuku eziningi, noma basebenzise igumbi njengendawo yokuphahlazeka ethokomele lapho bezohlola khona isifunda saseMidcoast. Uma ufuna indawo ongalungisa kuyo ukudla, ujabulele ama-cocktails egcekeni langasese, noma ube yedwa ehlane laseMaine, indawo yethu cishe ayihambisani nomthethosivivinywa...kodwa kunezinye izinketho eziningi endaweni. lokho bekungaba.
Eminye imininingwane okufanele uyiqaphele ukuze kungabikho okumangazayo: Igumbi alinayo i-TV kodwa line-Wi-Fi. Kukhona isethi yamatshe nezitebhisi zokhuni ezikhuphukela emnyango osuka ku-driveway yangasese...uma ungakwazi ukuphakamisa amapotimende akho lokhu kungaba inkinga, nakuba siyajabula ukusiza ngemithwalo uma sisekhaya. Futhi, indlu yethu ifana kakhulu neyama-1850s kodwa idolobha elizungezile selikhulile futhi umgwaqo ongaphandle kwekhaya uhamba kahle. Indawo efanayo eyenza indawo yethu ibe isitobhi esikahle kakhulu iphinde isho ukuthi ikhaya alicashile kakhulu....kodwa izihambeli eziningi zibika ukuhlala okuzolile noma kunjalo.
Nakuba kufaneleka kakhulu kubantu abadala ababili, imindeni emincane enezingane ezingenandaba nokulala phansi yamukelekile. Indawo eyanele yaphansi yezikhwama zokulala ezimbalwa (azinikeziwe).
I-Waldo County inomnyakazo ophumelelayo wokudla wendawo - yima ngaseBelfast Co-op ukuze uhlole amashalofu abo agcwele kahle okudla kwasendaweni nokwemvelo, noma uvakashele enye yezimakethe zethu ezimbili ezinhle zabalimi: i-Belfast Farmer's Market (NgoLwesihlanu 9-1, unyaka wonke, ngaphandle ehlobo, endlini ebusika) noma i-United Farmers Market yaseMaine (NgoMgqibelo 9-1, unyaka wonke, ngaphakathi). Hamba ngezinyawo eduze ne-Belfast Harbour Walk, uhlole izitolo ezichumayo zedolobha nezindawo zobuciko, bese uqeda kusihlwa ngesidlo sakusihlwa ngaphandle emphemeni e-Young's Lobster Pound, ebheke i-Penobscot Bay enhle. (Siyakwazisa - Okuncane yi-BYOB!) Ezinye izindawo eziningi ezithakazelisayo, eziseduze nezikude - vele ubuze!
Ngibamba ngokubambisana nozakwethu uDameon. Sobabili siyatholakala ngombhalo noma nge-imeyili ukuze siphendule noma yimiphi imibuzo onayo, futhi isistimu yemilayezo ye-Airbnb cishe iyindlela engcono kakhulu yokufinyelela kithi, njengoba sihlala siphuma sihamba. Igumbi lihlukaniswe nendlu yethu yonke ngephasishi elifushane - zizwe ukhululekile ukungqongqoza emnyango wethu wasekhishini uma unemibuzo, kodwa ngeke sikuzwe ngaphandle kokuthi sibe khona kanye ekhishini.
Akudingekile ukungena mathupha kodwa uma sisekhaya siyajabula ukusho sawubona futhi sinikeze noma yiluphi usizo esingalunikeza mayelana nezincomo zokudla kwasendaweni nokuphuma ngaphandle - silithanda ngempela idolobhana lethu elincane futhi siyakujabulela ukusiza abanye benze okungcono kakhulu. kwayo.
Ngibamba ngokubambisana nozakwethu uDameon. Sobabili siyatholakala ngombhalo noma nge-imeyili ukuze siphendule noma yimiphi imibuzo onayo, futhi isistimu yemilayezo ye-Airbnb cishe…
ULeigh Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Belfast namaphethelo